အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ | အိုင်ဖုန်းသတင်းများ (စာမျက်နှာ ၂)
ဟုတ်တယ်၊ ဟုတ်တယ်။ iPhone7ကအနက်ရောင်လည်းဖြစ်ပုံရတယ်
ကောလဟာလများအရ All-black iPhone7model ရှိမည်ဟုဆိုခဲ့ပြီး SIM card trays များသည်အရောင်သစ်ကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။
ရှေ့မျက်နှာပြင် iPhone7၏ပုံရိပ် - ပိုကြီးသည့်နားကြပ်၊ အိုးအိမ်မဲ့အာရုံခံကိရိယာ
ယိုစိမ့်မှုနှင့်အတူ iPhone7၏ရှေ့မျက်နှာပြင်မှာယိုစိမ့်နေပြီးအပြောင်းအလဲများရှိနေသည်။ အာရုံခံကိရိယာများသည်တူညီသောအနေအထားတွင်မရှိပါ။
iPhone7Lightning EarPods ၏ဗီဒီယိုကိုလည်ပတ်နေသည်
ကျနော်တို့ယိုစိမ့်၏ပတ်ပတ်လည်ကိုဆက်လက်။ iPhone7၏တကယ့်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးသည့်နောက် iPhone7၏ Lightning EarPods ၏နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ကောလာဟလအသစ်များအရ iPhone7Plus တွင်3GB RAM ရှိမည်ဟုသိရသည်
နောက်ဆုံးထုတ် DigiTimes အစီရင်ခံစာအရမှတ်ဥာဏ်ထုတ်လုပ်သူများမျှော်လင့်ထားသည့်အမြတ်အစွန်းတိုးလာခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ iPhone7သည်3GB ရှိမည်
ဤအရာသည် iPhone7၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ရုပ်ပုံများလား။
iPhone7mockups တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တွေ့ဖူးပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမယ့်ဒါတွေကနောက် Apple စမတ်ဖုန်းရဲ့ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ပုံရိပ်တွေပါ။
Unbox Therapy က iPhone7Plus mockup ကိုအပြာရောင်ဖြင့်ပြသည်
iPhone7ကိုအနက်ရောင်နေရာများအဖြစ် space grey ထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာရောက်ရှိလာပြီး Unbox Therapy မှ iPhone7Plus အားအပြာရောင်ဖြင့်ပြသထားသည်။
အက်ပဲလ်ရောင်းချသူ Qorvo က iPhone7ကို ၀ ယ်လိုအားပြင်းလွန်းသည်
iPhone7ဟာရောင်းအားကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်တဲ့အခါမှာ Apple ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ Qorvo ကနောက်ထပ် Apple ဖုန်းကို ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ဤ Mute switch သည် iPhone7Space Black ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုပါသည်
ကောလဟာလများအရ iPhone7တွင်အမှောင်ထုများပိုမိုထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Space Black မော်ဒယ်လ်ရှိလိမ့်မည်ဟုဤအသံတိတ်ခလုတ်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
ဒီ iPhone7နဲ့လာမယ့် Lightning-Jack adapter လား။
iPhone7box ထဲမှာ Apple က Lightning-Jack adapter ထည့်မလား။ တကယ်လို့အဲလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာငါတို့တွေ့နိုင်တာလား။ လူအများကထိုအရာကိုယုံကြည်ကြသည်။
iPhone7အတွက်ကြိုတင်မှာယူမှုများသည်စက်တင်ဘာ ၉ ရက်တွင်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်နေ့တာရဲ့ ၅ ချက်။
iPhone7နှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဆက်လက်ရရှိနေသည်။ ယနေ့တွင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်နေ့ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ရွေးချယ်မည့်နေ့ရက်သည်စက်တင်ဘာ ၉ ရက်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်သစ်က iPhone7၏ home ခလုတ်အသစ်သည်အသစ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးရှေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူပိုလျှံသွားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်
မြစ်ရေထွက်သည့်အခါ - ၂၀၁၆ iPhone 2016 ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ ၂၀၁၆ သည်အသစ်ပြုပြင်ထားသောအိမ်ခလုတ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
ကောလဟာလ - ဒီနှစ် iPhone ကို iPhone 6SE လို့ခေါ်ပြီးစက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်မှာတင်မယ်
iPhone7၏တင်ဆက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးစောင့်ဆိုင်းသောအခါနောက်ဆုံးကောလဟာလများက၎င်းသည် iPhone 6SE ၏အမည်အောက်တွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုသေချာစေသည်
အထူးသဖြင့် iPhone နှင့် Apple နှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးသတင်းများကိုသင့်အားပြသမည့်အပတ်စဉ်အသစ်
iPhone7ရှေ့မျက်နှာပြင်ပေါက်ကြားခြင်း
တစ်ခုခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာယိုစိမ့်နေတဲ့ iPhone7ရဲ့ရှေ့မျက်နှာပြင်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒီပုံကသူမတူညီတဲ့အိမ်ခလုတ်ကိုပြလိမ့်မယ်။
iPhone7၏တင်ဆက်မှုကိုစက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်
ပထမဆုံးနေ့စွဲရှိသည်။ အဓိကပေါက်ကြားသူတစ် ဦး ၏အဆိုအရ iPhone7နှင့် iPhone7Plus ကိုစက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင်တင်ဆက်လိမ့်မည်။
နှင်းဆီရွှေရှိ iPhone7သည်တူညီသောအရောင်ရှိသော iPhone 6s ဘေးတွင်ဗွီဒီယိုတွင်ပါရှိသည်
သံသယဖြစ်သင့်သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သော်လည်းဗီဒီယိုတစ်ခုထွက်လာသည်။ ၎င်းတွင် iPhone7သည်နှင်းဆီရွှေမှရွှေရောင်နှင်းဆီတစ်ပွင့်ကိုမြင်တွေ့ရသည်။
iPhone7၏နံပါတ်နှစ်ခုကိုဖော်ပြခဲ့သည်
သတင်းကောင်း! ယိုစိမ့်မှုလောကမှအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏အဆိုအရ iPhone7သည်မော်ဒယ်နှစ်မျိုးသာရှိသည်။ နှုတ်ဆက်တဲ့ iPhone7Pro?
iPhone7မော်ဒယ်သုံးခုကိုပြသခဲ့တဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်များ - iPhone7Pro, iPhone7Plus နှင့် "normal"
ယခုနှစ်တွင် iPhone7Pro၊ iPhone7Plus နှင့်“ Standard” iPhone7တို့ရှိလိမ့်မည်ဟူသောကောလာဟလအသစ်နှစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်။
iPhone7သည်ထောင့်ပေါင်းစုံမှဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုပေါ်လာသည်
ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုသည် iPhone7၏ဒီဇိုင်းသည် iPhone6၏ဒီဇိုင်းနှင့်နီးစပ်လိမ့်မည်ဟုထပ်မံအတည်ပြုသည်။
အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးထွက်နေသည့်ကြားမှ Apple နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများ၊ အထူးသဖြင့် iPhone7အသစ်များသည်ဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာသည်
iPhone7၏ပထမဆုံးအခြေခံစံသတ်မှတ်ချက်များပေါ်လာသည်။ iPhone 18s ထက် ၁၈% ပိုမြန်သည်
မဖြန့်ချိမီနှစ်တိုင်းကဲ့သို့ပင် iPhone7၏ပထမဆုံးအခြေခံစံနှုန်းများပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး၎င်းသည် iPad Pro ကဲ့သို့အစွမ်းထက်သည်။
ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုက iPhone7ကို headphone jack connection မပါဘဲပြသထားသည်
ယနေ့တွင်သင့်အား iPhone7ပုံရိပ်အချို့ကိုကြည့်နိုင်သည့်နားကြပ်ပေါက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်မည့်ဗွီဒီယိုအသစ်တစ်ခုကိုသင်ပြသည်။
iPhone7mockup အသစ်ပုံရိပ်တွင်၎င်းတွင် mute switch တစ်ခုရှိမည်ဟုဆိုခဲ့သည်
ပုံရိပ်အသစ်နှစ်ခုပေါ်လာပြီး ၄ လက်မအရွယ် iPhone7သည်ဖုန်းကိုအသံတိတ်စေရန်အတွက်ခလုတ်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ထိုအ Plus အား?
iPhone7ပြပွဲမော်ဒယ်သစ်ပုံရိပ်
နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲစတင်သည်ပုံရသည်။ ပြပွဲမော်ဒယ်လေးခုတွင် iPhone7အရောင်လေးမျိုးကိုတွေ့ရသည့်ပုံသစ်တစ်ခုပေါ်လာသည်။
"စိတ်ချရသော" အရင်းအမြစ်က iPhone7၏ဘက်ထရီသည် iPhone 6s ထက်ပိုကြီးမည်ဟုသေချာသည်
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလိုချင်သူများအတွက်သတင်းကောင်း - ၁၀၀% နီးပါးယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်တစ်ခုသည် iPhone 100 ၏ဘက်ထရီသည် iPhone 7s ထက်ပိုကြီးကြောင်းသေချာသည်။
iPhone7Lightning EarPods သည်ဓာတ်ပုံပြန်ပေါ်လာသည်
iPhone7နားကြပ်၏ပုံရိပ်အသစ်များက Lightning EarPods သည်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်မည်ကိုပြသပြီး ၃.၅ မီလီမီတာ port မပါဘဲရောက်ရှိမည်ကိုအတည်ပြုသည်။
iPhone သုံးစွဲသူ ၁၄.၈ ရာခိုင်နှုန်းသာ iPhone 14,8 ကိုဝယ်ယူကြလိမ့်မည်
လေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကပြောကြားသည်မှာ iPhone7တွင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုမရှိခြင်းနှင့်၎င်း၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဒီဇိုင်းသည်သုံးစွဲသူများကိုထုတ်ကုန်အသစ်ပြန်လည်ဆွဲဆောင်ရန်ဆွဲဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ
ဤတစ်ခုမှာ - iPhone7အမှုအရာပေါ်လာသည်။ ဤတစ်ခုသည်ကင်မရာအတွက်လက်စွပ်မပါပဲ
iPhone7၏တကယ့်အစိတ်အပိုင်းများစတင်ပေါ်ထွက်လာနေပုံရသည်။ ဤတွင်နောက်လာမည့်ပန်းသီးစမတ်ဖုန်းမှအမှန်တကယ်ကြည့်သည့်အရာဖြစ်သည်။
iPhone7အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုစတင်; ဒါတွေကမင်းရဲ့ကင်မရာအပိုင်းတွေပါ
မော်တာတက်အပူ! iPhone7ကိုအကြီးအကျယ်ထုတ်လုပ်မှုစတင်ပါပြီ။ ဒီနေရာမှာမင်းရဲ့ကင်မရာရဲ့ module အမျိုးမျိုးရဲ့ဓာတ်ပုံရှိတယ်။
iPhone7ကိုသူ့ရဲ့အခြေခံဗားရှင်းမှာ 32 GB ထည့်သွင်းထားပါတယ်
Wall Street ဂျာနယ်ကဖော်ပြသည်မှာအခြေခံကျသောဝင်ငွေမော်ဒယ်မှာ ၁၆၂ GB ထက် ၃၂ ​​GB သာရှိလိမ့်မည်။
ဒုတိယစပီကာကိုအတည်ပြုပေးမည့် iPhone7ပရိယာယ်သစ်များပေါ်ထွက်လာသည်
အချို့သော iPhone7အစီအစဉ်အသစ်များမှာပေါက်ကြားခဲ့ကြပြီး၎င်းတွင်အသစ်အဆန်းများရှိနေသည်။ ဒုတိယစပီကာတစ်ခုရှိနေသည်။ စက်တင်ဘာလမှာငါတို့မြင်မလား
iPhone7ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကပုံရိပ်ဟာဒတ်ခ်ျဝက်ဘ်ဆိုက်မှာပေါ်လာသည်
iPhone7ပုံရိပ်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာပေမယ့်ကောလဟာလတွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အစိတ်အပိုင်းအချို့ပါရှိပါတယ်။ ဒါကတကယ့်လား၊
TSMC သည် iPhone 10 အတွက် A7 ချစ်ပ်ကိုသီးသန့်ထုတ်လုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်
TSMC ၏ထုတ်ပြန်ချက်အရ၎င်းသည် Samsung ကိုမထည့်ဘဲ iPhone 10 ၏ A7 ချစ်ပ်ကိုနောက်ဆုံးတွင်သီးသန့်ထုတ်လုပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
အနက်ရောင်အိုင်ဖုန်း7သဘောတရား၊ Martin Hajek မှ
ကောလဟာလတွေထွက်လာတဲ့သတင်းတွေအရတော့မီးခိုးရောင်အိုင်အက်စ် (၇) ဟာမဲမှောင်လာလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အမည်းရောင်ဟာပိုကောင်းမလာဘူးလား။ ဒီဇိုင်နာတစ် ဦး ကအနက်ရောင်အိုင်ဖုန်း ၇ ကိုမည်သို့ပုံဖော်မည်ကိုစိတ်ကူးနေသည်။
ကောလာဟလအသစ်များအရ iPhone7မော်ဒယ်လ် ၃ ခုရှိလိမ့်မည်ဟုသီအိုရီကိုထောက်ခံသည်။ Normal, Plus နှင့် Pro; 16GB ပျောက်ကွယ်သွား
၎င်းကိုအတည်ပြုရန်လိုသေးသော်လည်း iPhone7သည်ပုံမှန် model Plus နှင့် Pro ကိုရရှိမည်ဟုအာမခံသောကောလာဟလများစွာရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် 16GB ပျောက်ကွယ်သွားသလား။
လေ့လာသုံးသပ်သူများက iPhone7၏ Touch ID သည်ထိတွေ့မှုရှိလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်
လေ့လာဆန်းစစ်သူတစ် ဦး က iPhone7၏ Touch ID သည်ဖိအားကိုထိခိုက်နိုင်သောကောလာဟလကိုအတည်ပြုပေးပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ငါတို့မြင်ရမလား
iPhone7ရောင်းအားမျှော်လင့်ချက်ကအစိတ်အပိုင်းအမှာစာအရေအတွက်ကိုလျော့နည်းစေသည်
အာရှထုတ်လုပ်သူများစွာ၏အဆိုအရ Cupertino အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသည် iPhone7အတွက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အမှာစာအကြီးအကျယ်မပေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
ဒီနေရာမှာမီးခိုးရောင်အိုင်ဖုန်း7ဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ
iPhone7ရဲ့မီးခိုးရောင်နေရာဟာပိုမိုမဲမှောင်လာလိမ့်မယ်လို့သင်ကြားဖူးလား။ ဒီနေရာမှာ iPhone ကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာပြသနိုင်တဲ့ပုံရိပ်တွေရှိတယ်။
iPhone7ဓာတ်ပုံအသစ်တွင်ဒုတိယစပီကာကိုပြသခဲ့သည်
သူတို့သည်? iPhone7Case ၏ဓာတ်ပုံအသစ်တွင်၎င်းတွင်ယခင်ကယုံကြည်ခဲ့သည့်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲစပီကာနှစ်လုံးပါရှိလိမ့်မည်ကိုပြသသည်။
ဤအရာများသည် iPhone7/ Plus အမှု၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ဓာတ်ပုံများလား။
အမှန်တကယ် iPhone7နှင့် iPhone7Plus ဖြစ်ပွားမှုများ၏ပထမ ဦး ဆုံးဓာတ်ပုံ ၂ ပုံသည်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ အရာများစွာကိုအတည်ပြုပြီးအံ့သြစရာတွေရှိပါတယ်။
iPhone7Plus ၏ပထမဆုံးကိုယ်ပွားသည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည်
သူတို့ကအချိန်ယူနေကြပြီ။ iPhone7ရဲ့ပထမဆုံးကိုယ်ပွားပေါ်ထွက်လာပြီ။ မကြာသေးမီကထွက်ပေါ်လာတဲ့ကောလာဟလများကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
iPhone7ရဲ့စျေးနှုန်းတွေကိုစစ်ထားတယ်
ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော iPhone7စျေးနှုန်းများကို Weibo တွင်ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးပြောင်းလဲခြင်းကိုပြုလုပ်သောကြောင့်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သော Pro model သည်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာသည်။
iPhone7ရဲ့နားကြပ်ကပိုကြီးလိမ့်မယ်။ အာရုံခံကိရိယာ offset လိမ့်မည်
iPhone6မှာ iPhone 7s နဲ့ Protector တွေကိုသုံးလို့ရပြီလို့ထင်လား။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ နားကြပ်ကပိုကြီးပြီးသူတို့နဲ့အံဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သင့်တွင် iPhone 4s သို့မဟုတ် iPhone5ရှိပါသလား။ သင် iOS 10 ကိုသူ၌တပ်ဆင်နိုင်မလားသိလိုပါသလား။ iOS 10 နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ iPhone မော်ဒယ်များကိုရိုက်ထည့်ရှာဖွေပါ
Wall Street ဂျာနယ်က၎င်းကိုအတည်ပြုသည် - iPhone7တွင်အဓိကဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုများမပါဝင်ပါ။ yeah 2017 ကနေတ
Wall Street ဂျာနယ်ကအချို့သောကောလာဟလများကိုပြောကြားခဲ့သည်မှာ - iPhone7သည်ဒီဇိုင်းအပြောင်းအလဲမရှိဘဲရောက်လာမည်ဖြစ်သည်။ 2017 ခုနှစ်မှာကော။
ကောလာဟလအသစ်များအရ iPhone7သည် EarPods နှင့် Lightning adapter တို့ဖြင့်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်
Apple ကဒီလိုလုပ်ရင်အံ့အားသင့်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် iPhone7ကိုပုံမှန် EarPods နဲ့ Lightning adapter နဲ့အတူရောက်လာမယ်လို့ကောလာဟလထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ငါတို့မြင်ရမလား
ဒီကောလဟာလတွေအရ iPhone7မှာ SIM ကဒ်နှစ်ခုပါရှိပါတယ်
iPhone7နှင့်ပတ်သက်ပြီးကောလဟာလများဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေသည်။ နောက်တစ်ခုမှာလာမည့်ပန်းသီးစမတ်ဖုန်းသည်ဆင်းမ်ကဒ်နှစ်လုံးပါ ၀ င်သည့် SIM ကဒ်နှစ်ခုဖြစ်မည်ကိုသေချာစေသည်
Bluetooth 5.0 ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များ
ပုံတစ်ပုံက iPhone3မော်ဒယ်လ် ၃ ခုရှိမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်
Weibo မှထွက်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ပုံက Apple က iPhone7မော်ဒယ်သုံးမျိုးကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပေမယ့်တတိယကတော့ Pro လား။ တတိယကတော့ ၄.၇ "ပါ။
iPhone7မှာ dual camera ဗားရှင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကော။ [ကောလဟလ ... မဖြစ်နိုင်]
မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောကောလာဟလသတင်းများအရ Apple သည်လက်လျှော့လိုက်ပြီဖြစ်သည့်အတွက် dual-camera iPhone7ရှိတော့မည်မဟုတ်ဟုဆိုခဲ့သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သာမှန်။ သာမန်ကင်မရာတစ်လုံးတည်းသာရှိလျှင်မည်သို့ပြုမည်နည်း။
iPhone7တွင်ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သောအိမ်ခလုတ်များယိုစိမ့်နေသည်
iPhone7မှာ Home ခလုတ်မလိုချင်ဘူးလား။ ကောင်းပြီ, ဒီ "ယိုစိမ့်" ကဒါဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသေချာပေမယ့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ။ စက်တင်ဘာလမှာငါတို့မြင်မလား
Concept7က iPhone XNUMX Deep Blue ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာပြတယ်
မကြာသေးမီကကောလာဟလများအရ Apple သည် iPhone7အတွက်အရောင်သစ် "Deep Blue" ကိုစတင်မိတ်ဆက်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါကိုစစ်ဆေးပါ။
နာမည်ကျော်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူက iPhone7ဒီဇိုင်းကိုအတည်ပြုသည်
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ iPhone7၏ဒီဇိုင်းသည်ပိုမိုရှင်းလင်းလာပြီးယနေ့တွင်နာမည်ကျော်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ Sangeng ကအတည်ပြုသည်။
iPhone7သည် Deep Blue အတွက် Space Grey ကိုပြောင်းလဲမည်
iPhone7နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများအရ Apple သည်အပြာရောင်အတွက်အရောင်နေရာပြောင်းရန်ရည်ရွယ်ထားသည်
LG Innotek သည် iPhone7Plus ကင်မရာမှန်ဘီလူးများကိုတစ် ဦး တည်းသောရောင်းချသူဖြစ်နိုင်သည်
ယခုအချိန်အထိ iPhone ကင်မရာမှန်ဘီလူးများသည် Sony မှဖြစ်သည်။ သို့သော် iPhone7Plus သည် LG Innotek မှန်ဘီလူးကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
CPR လုပ်နေစဉ် ER ကိုဖုန်းခေါ်ရန် Siri ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မိခင်တစ် ဦး သည်သမီး၏ဘဝကိုကယ်တင်သည်
အမြဲတမ်းအသုံးပြုနေသော Siri သည်မိခင်ဖြစ်သူအား CPR လုပ်နေစဉ်ဖုန်းပြောခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး ၏အသက်ကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သည်
ယနေ့ခေတ်တွင် Steve Jobs သည် iPhone4ကိုတင်ဆက်သည်
WWDC မှာစတိဗ်ဂျော့ဘ်က iPhone7ကိုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ဇွန် ၇ ရက်မှာဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တာပါ။
Apple က "Shot on iPhone" လှုပ်ရှားမှု၏ဗီဒီယိုအသစ် ၈ ခုကိုထုတ်ဝေသည်
Apple က iPhone 6s နဲ့ iPhone 6s Plus ကိုမြှင့်တင်တဲ့ဗွီဒီယိုတွေကိုပြန်လည်တင်ထားတယ်။ ယခုတကြိမ်တွင် ၈ ယောက်ရှိပြီးသူသည်၎င်းတို့အား "Shot on iPhone" မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Broadcom က iPhone7သည်အရောင်းရဆုံးရောင်းသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလည်းယုံကြည်သည်
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် iPhone ရောင်းအားကျဆင်းမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသောအနုတ်လက္ခဏာချိန်ညှိချက်များအပြီးတွင် Broadcom က iPhone7သည်စံချိန်အသစ်များချိုးဖောက်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။
iPhone7တွင် 21Mpx ကင်မရာ၊ USB-C နှင့် 3GB RAM [ကောလဟလ]
ကောလာဟလသတင်းများအရ iPhone7သည်၎င်း၏ကင်မရာသည် 21Mpx သို့တိုးလာမည်ကိုမြင်ရပြီး USB-C ရှိမည်ဖြစ်သည်။
iPhone7Plus အိတ်များတွင်ကင်မရာနှစ်ခုနှင့် Smart Connector တို့အတွက်နေရာရှိသည်
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် iPhone7Plus တွင်ကင်မရာနှစ်လုံးနှင့် Smart Connector ပါရှိလိမ့်မည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကပိုပေးသလား။
ဒါက iPhone7သဘောတရားတစ်ခုပဲ
iPhone7ကိုအလူမီနီယံနှင့်ဖန်ထည်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပုံရိပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လိုလျှင်သင်မည်သို့ထင်သနည်း။
iPhone7ကို 32GB, 128GB နှင့် 256GB တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်
iPhone7သည် 32GB ၀ င်ရောက်မည်ဟုကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာသော်လည်းအခြားမော်ဒယ်လ် ၂ ခု၏သိုလှောင်မှုတွင်အံ့အားသင့်စရာများရှိသည်။
BMO မှလေ့လာဆန်းစစ်သူက iPhone7သည်အရောင်းစံချိန်ကိုပြန်လည်ချိုးဖောက်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
ယခုနှစ်တွင် iPhone ရောင်းအားကျဆင်းလာသည်မှာပထမဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်လေ့လာသုံးသပ်သူတစ် ဦး ကမူ၎င်းတို့သည် iPhone7နှင့်အတူစံချိန်တင်သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
iPhone7၏ရွှေနှင်းဆီ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပုံသစ်
နောက်ပုံတစ်ပုံထွက်လာသည်။ iPhone7၏အစိတ်အပိုင်းဟုထင်ရသည်။ ယခုအကြိမ်တွင်သင်နောက်ထပ် Apple စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုယူဆောင်လာသည်။
Lightning-Jack adapter များသည် iPhone7မတိုင်မီစတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်
iPhone7ဖြန့်ချိရေးနီးကပ်လေလေ 3.5mm port မပါဝင်တာကပိုရှင်းလေပဲ။ Lightning-jack adapters တွေပေါ်လာပြီ။
လာမည့် iPhone7၏အခြေခံမော်ဒယ်မှာ 32 GB ဖြစ်သည်
IHS Technology လေ့လာဆန်းစစ်သူများ၏အဆိုအရ iPhone7အကွာအဝေး၏အခြေခံဝင်ငွေမှာလက်ရှိ 32 GB အစား 16 GB ဖြစ်သည်
Smart Connector ဖြင့် iPhone7Plus အားအတည်ပြုသောအခြားအစီအစဉ်တစ်ခု၊ 6s ကဲ့သို့တူညီသောအရွယ်အစား
iPhone7နှင့် iPhone7Plus / Pro တို့၏နောက်ထပ်သိထားသင့်သည့်အချက်ကပိုမိုကြီးမားသောမော်ဒယ်တွင် Smart Connector ရှိမည်ဖြစ်သော်လည်းဒီဇိုင်းအနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားသည်။
စပီကာနှစ်ခုနှင့် USB-C ပါသည့် iPhone7Plus သဘောတရား
iPhone7တင်ဆက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့လေးလကွာဝေးသည်။ သို့သော်သင်အဘယ်အရာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သည်ကိုမြင်လိုပါကစပီကာနှစ်ခုနှင့် USB-C တို့ဖြင့်ဤအယူအဆကိုသင်တွေ့မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
iPhone7ရဲ့ရှေ့ကာကွယ်မှုကကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးဆိုတာပြသထားတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၌ iPhone7၏ရှေ့မှန်မှန်၏ပထမဆုံး "အစစ်အမှန်" ပုံရိပ်ကိုရှိပြီးသားဖြစ်ပြီးအလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိသည်။ အပိုတွင်းကဘာလဲ
iPhone6ရှေ့ပြေးပုံစံသည် eBay တွင်ဒေါသကြီးသည်
iPhone6၏ရှေ့ပြေးပုံစံသည် eBay တွင်ခိုးဝင်ပြီးလေလံတင်မှုများတွင်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေသည်။ ၎င်းကိုသင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကျော် ၀ ယ်နိုင်သည်။
iPhone7၏ထုတ်လုပ်မှုပြားများတွင် Smart connector ကိုမပြပါ
iPhone7မှာ Smart Connector ရှိမလား။ iPhone7၏ထုတ်လုပ်မှုပြားများအရ iPhone7Plus တွင်ပင်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အကုန်တွင် Apple သည် iPhone 80s သန်း ၈၀ နီးပါးကိုလိုချင်နေသည်
နေ့၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့လည်းပြသနေသောဓာတ်ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ပန်းချီကားများ၊ ပုံကားချပ်များဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးသည်လာမည့် iPhone7ဖြစ်မည်ဟုအတည်ပြုကြသည်။ ၎င်းသည်ရောက်ရှိလာသည်။
ဤသည်မှာ iPhone7အမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ်ဖြစ်နိုင်သည်
ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရ iPhone7ရဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်ကဘာလဲ။ ၀ င်ပါ၊ ဘာဖြစ်မည်ကိုရှာပါ၊ သို့မဟုတ်သင်မထင်လျှင်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပေးပါ။
iPhone7၏ပုံသဏ္alternativeာန်ကိုအခြားစာသားဖြင့်ပုံဖော်နိုင်သည်။ စပီကာလေး
တရား ၀ င်သောအရာတစ်ခုခုကိုမကြေငြာမီအထိ၎င်းသည်နောက်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းမပြောနိုင်ပါ။ စပီကာလေးလုံးပါသည့် iPhone7၏ဓာတ်ပုံများပေါ်လာသည်။ အစစ်အမှန်လား
iPhone7ကင်မရာများ၏ပုံရိပ်အသစ်နှင့် 256GB မှတ်ဉာဏ်တို့ပါ ၀ င်သည်
iPhone7Plus ၏ dual ကင်မရာနှင့်သာမာန်မော်ဒယ်လ်၏ရိုးရှင်းသောပုံရိပ်အသစ်များသည်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။ 256GB iPhone ရှိပါသလား။
iPhone7သည် LG မှန်ဘီလူးများကိုသုံးနိုင်သည်။ (Sony မဟုတ်ပါ)
iPhone7သည် Sony မှန်ဘီလူးများအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ LG သည်ယခုနှစ်တွင်မှန်ဘီလူးနှစ်ခုပါသောကင်မရာကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ပြီးဆိုနီကမူမရရှိနိုင်ပါ။
iPhone7၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ရုပ်ပုံများကိုစစ်ထုတ်သည်။ မှားသည်
ငါတို့ရှိသမျှသည်သီးသန့်ပေးလိုသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် iPhone 100 ၏ဤပြန်ဆိုမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်မဖြစ်ပျက်စေရန်အရာရာကိုမျက်လုံး ၁၀၀ ဖြင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုရန်လိုသည်။
iPhone 50 ၏ LTE ချစ်ပ်များ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို Intel မှထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်
တရုတ်နိုင်ငံမှနောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလများအရ Intel သည် iPhone အသစ်၏ LTE ချစ်ပ်များကိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်နိုင်သည်
OnLeak နှင့် StuffTV တို့ကနောက်ထပ် ၃၆၆ºººººººº render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render
OnLeaks သည်နောက်ထပ် ၃၆၆ ofºººººººº render render render render render render render render render render render render render render render render render render renderº render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render render iPhone render render iPhone iPhone 360 iPhone iPhone iPhone iPhone iPhone iPhone iPhone iPhone iPhone ။ again again ။3again ဟုတ်ကဲ့၊ Smart Connector နှင့်မှန်ဘီလူး dual camera တို့ပါလိမ့်မည်။
ယခုအချိန်၌ iPhone7၏ယိုစိမ့်နေသည့်ဓာတ်ပုံသစ်
တရုတ်နိုင်ငံမှ iPhone7၏ပုံရိပ်များကိုပြန်လည်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး၎င်းသည်နိမ့်ကျသောဖုံးလွှမ်းနေသောလိုင်းများမှထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်။
ဤရွေ့ကား, ငါ့အဘို့, အကောင်းဆုံး 10D Touch ကိုအမူအရာ 3
တင်ပြပြီးနောက်ရှစ်လအကြာတွင်ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား iPhone 3s သို့မဟုတ် iPhone 6s Plu နှင့်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံး 6D Touch ကိုယ်ဟန်ကိုပြသသည်။
OnLeaks သည် iPhone 360 ၏7º rendering ကိုလည်းစစ်ထုတ်သည်
ယခုအပတ်မှာနှစ်ကြိမ်ပေါက်ကြားမှုကြောင့် iPhone7ဟာဒီဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အထဲ ဝင်၍ ထွက်ရှာပါ။
iOS7နှင့်အတူ iPhone 10 ၏ concept ကိုအသစ်
ဒီနှစ်စက်တင်ဘာလမှာလာမယ့် iPhone7ကိုဒီဇိုင်နာများဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုတာကိုအခုသင်ပြပါမယ်
iPhone 7: ငါတို့သိသမျှအကုန်သိပြီ
iPhone7အကြောင်းရေးသားထားသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုရိုက်ထည့်။ ရှာပါ။ အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်။
အက်ပဲလ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများက“ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမရှိခြင်း” ကြောင့် iPhone7ဝယ်လိုအားနိမ့်
ယုံချင်ယုံမယုံချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် Apple ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများက iPhone7ဟာဆန်းသစ်တီထွင်မှုအားနည်းနေလို့ရောင်းအားသိပ်မရောင်းနိုင်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။ Plus model ကိုသင်တန်ဖိုးမထားဘူးလား။
iPhone7Plus တွင် 3GB RAM ရှိနိုင်သည်
iPhone7Plus သည်သူ၏ညီငယ်အပေါ်တွင်များစွာတိုးတက်မှုများရှိနိုင်ကြောင်းလေ့လာဆန်းစစ်သူတစ် ဦး ၏ပြောကြားချက်အရ၎င်းသည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်ကင်မရာအတွက် 3GB RAM ရှိလိမ့်မည်။
iPhone7နဲ့ iPhone7Plus တို့ဟာဘာနဲ့တူမလဲဆိုတာသင်သိချင်ပါသလား။ ဒီမှာသင့်မှာရှိတယ်
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီ - ဒီနှစ်မှာတော့ iPhone7နဲ့ iPhone7Pro ကိုဒီနှစ်မှာဘယ်လိုပြသမလဲဆိုတာကိုပြသတဲ့ကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန်ဆိုချက်တွေပေါ်လာပါပြီ။
ဒီဟာက iPhone7ရဲ့ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ပုံလား။ Mmmm မထင်ဘူး
အမှန်တကယ် iPhone7၏ပထမဆုံးဓာတ်ပုံဖြစ်နိုင်သည့်ပုံကိုကွန်ယက်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်မည်လောသို့မဟုတ်အတုလား?
mockup အသစ်သည် iPhone7၏ဒီဇိုင်းနှင့်အရွယ်အစားကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။ (Bender နှင့်တူမည်မဟုတ်)
render အသစ်တစ်ခုသည်စက်တင်ဘာလတွင်ရောက်ရှိလာမည့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သော iPhone7၏ဒီဇိုင်းနှင့်အရွယ်အစားကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။ Futurama က Bender လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။
Mac Otakara က iPhone7မှာ Smart Connector မရှိဘူးလို့ပြောတယ်
အချို့သောကောလာဟလများအရ iPhone7တွင် Smart Connector ရှိမည်ဟုဆိုသော်လည်း Mac Otakara က Apple သည်မည်သည့်အခါမျှထည့်သွင်းရန်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမရှိဟုပြောကြားခဲ့သည်။
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရဲဌာနမှ The Shield စီးရီးမှသရုပ်ဆောင် Michael Jace ၏ဇနီး၏ iPhone 5s ကိုသော့ဖွင့်နိုင်ခဲ့သည်။
Apple က iPhone SE ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်လိုက်သည်
iPhone SE အတွက်ကန ဦး ဝယ်လိုအားက Apple ကိုတောင်အံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့်နီးစပ်သောသတင်းရင်းမြစ်များက၎င်းတို့သည်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ရသည်
ဒီပုံရိပ်တွေက iPhone7မှာ 3.5mm port ရှိလိမ့်မယ်
iPhone7နှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်အကောင်းဆုံးကောလဟာလတစ်ခုမှာ၎င်းတွင် headphone port မရှိသော်လည်း၎င်းပုံသည်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ဟုဖြစ်သည်။
ဒီဟာတွေဟာ iPhone7Pro ရဲ့အယူအဆတွေလား။
သူတို့ကတရုတ်ပြည်မှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက် iPhone7Pro မှာဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအစီအစဉ်များကိုမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းမှာမှန်ဘီလူးနှစ်ခုပါသည့်ကင်မရာပါလိမ့်မည်။
Well-Fargo သည် Ming-Chi Kuo နှင့်ဆန့်ကျင်သည်။ iPhone7သည်ရောင်းအားမြှင့်တင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်
Ming-Chi Kuo ကပြောကြားသည်မှာ iPhone7သည်ရောင်းအားသိပ်မကောင်းသော်လည်း Wells Fargo က iPhone ရောင်းအားကိုတိုးမြှင့်စေလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
iPhone7မှာဖိအားကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ home button ရှိနိုင်တယ်
စက်တင်ဘာလတွင်တင်ဆက်မည့် iPhone7နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟလများဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေသည်။ သင်၏အိမ်ခလုတ်သည်ဖိအားကိုထိခိုက်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
iPhone SE သည်အာရှကုမ္ပဏီကြီးတွင်တရုတ်တံဆိပ်များကိုစားသုံးသည်
DigiTimes မှထုတ်ဝေသောနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ iPhone SE သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ Huawei သို့မဟုတ် Xiaomi ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဆီသို့ ဦး တည်နေသည်။
Qualcomm က Apple ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး iPhone7ကို Intel modem ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်
Qualcomm မှ၎င်းင်း၏ modem များအတွက်အရေးပါသောဖောက်သည်တစ် ဦး ဆုံးရှုံးသွားပြီဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဘယ်သူလဲ အများစုမှာ Apple နှင့် iPhone7သည် Intel modem ကိုအသုံးပြုသည်။
Mac Otakara က iPhone7မှာ ၃.၅ မီလီမီတာ port မရှိဘူး၊ Smart Connector ရှိမယ်ဆိုတာအတည်ပြုလိုက်တယ်
ဂျပန်ဘလော့ဂ်ဖြစ်သည့် Mac Otakara သည်ယခင်ကပေါက်ကြားခဲ့သောကြောင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော iPhone7သည် 3.5mm port မပါ ၀ င်ခြင်းနှင့် Smart Connector ရှိခြင်းကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။
iPhone SE အတွက်အိန္ဒိယငှားရမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကို Apple ကစတင်
၄ လက်မအရွယ်ဖုန်းအသစ်ကိုရောင်းရန် Apple ကငှားရမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်သည်။
iPhone SE နှင့်တစ်ပါတ် - လေးလက်မအတွတ်တောင့်တခြင်း
iPhone SE ၏ထင်မြင်ချက်များသည်အဘယ်နည်း။ iPhone 4s ၏နှလုံးသားနှင့် ၄ လက်မအရွယ် Apple Mobile နှင့်တစ်ပတ်အကြာတွင်အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
iPhone7မှာ Galaxy S7 ထက်ပိုကောင်းတဲ့ screen ရှိနိုင်တယ်
၉.၇ လက်မ iPad Pro သည် DisplayMate မှတ်တမ်းများစွာကိုချိုးဖောက်ခဲ့ပြီး iPhone 9.7 သည်ယှဉ်ပြိုင်မှုထက်သာလွန်သော display ရှိသည်လိမ့်မည်
iPhone SE အသစ်၏သုံးစွဲသူများသည် Bluetooth မှတဆင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်သည်
စျေးကွက်ထဲသို့တစ်ပတ်ကျော်ကျော်ရောက်နေသောအခါ iPhone SE သည်လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများတွင်အသံပြofferingနာများကိုပေးနေသည်
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်ခြင်း iPhone SE၊ ကြီးကျယ်တဲ့ iPhone လေး
iPhone 6s နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ခေတ်ကနည်းတူနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုကဘယ်လိုလဲ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်အိုင်ဖုန်း SE ဖြင့် Apple ကိုစကိတ်စီးခဲ့သည်
ဘားရက်အိုဘားမား၏အကြံပေးသူအများစုသည် iPhone ကိုသုံးနိုင်ကြသော်လည်းအမေရိကန်သမ္မတကဘလက်ဘယ်ရီကိုအသုံးပြုရန်ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်သည်။
ဤသည်မှာ Apple SE ဖြစ်သင့်သည့် iPhone SE ဖြစ်သည် (သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သည်)
သင့်တွင် iPhone 5, 5s သို့မဟုတ် iPhone SE ရှိပါသလား။ ၎င်းကိုပိုမိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောဒီဇိုင်းတစ်ခုလိုချင်ပါသလား။ ၎င်းကို iPhone 6s တစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်စေရန်အထူးကိစ္စတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကြိုးမဲ့ EarPods အယူအဆ
အပတ်တိုင်းနီးပါး iPhone7အတွက်အသစ်သောအယူအဆအသစ်များကိုတင်ပြသည်။
Siri ၏လုံခြုံရေးအားနည်းချက်က iPhone 6s / Plus တွင်စကားဝှက်မပါပဲဓာတ်ပုံနှင့်အဆက်အသွယ်များကိုခွင့်ပြုသည်
Touch iD (သို့) ကုဒ်သုံးစရာမလိုပဲဓာတ်ပုံနှင့်အဆက်အသွယ်များကိုကြည့်ရှုခွင့်ပြုသည့် Siri တွင်လုံခြုံရေးအားနည်းချက်အသစ်တစ်ခုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
iPhone SE ၏အစိတ်အပိုင်းများသည်ဒေါ်လာ ၁၆၀ ကုန်ကျသည်
IHS ကုမ္ပဏီသည် iPhone SE ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောမတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ဈေးနှုန်းကိုဒေါ်လာ ၁၆၀ ကုန်ကျကြောင်းထုတ်ဖော်ခဲ့သည်
Ming Chi Kuo မှပြောကြားသည်မှာ dual ကင်မရာသည် ၅.၅ လက်မ iPhone7တွင်သာရှိမည်ဟုဆိုသည်
ကောလာဟလအသစ်များအရ iPhone7တွင် dual camera ပါ ၀ င်သော ၅.၅ လက်မနှင့် ၄.၇ လက်မမော်ဒယ်လ်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုသေချာစေသည်။
iPhone7Plus ကင်မရာ module အသစ်၏ပုံရိပ်သစ်
iPhone7dual-camera ကင်မရာ module အသစ်၏ပုံရိပ်များသည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည်။ "မြစ်သည်ထွက်လာသောအခါ ... "
iPhone SE ဘယ်လောက်ကွေးပါသလဲ။
ဒါဟာအသစ်သောထုတ်ကုန်များအားလုံးကို dubbing လုပ်ငန်းစဉ်သို့လက်အောက်ခံရန်ဘုံစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပုံရသည် ...
iPhone7သည်နေရာအသစ်ချွေတာရန်အတွက် antenna module တွင်နည်းပညာအသစ်တစ်ခုသုံးနိုင်သည်
Apple က iPhone7ရဲ့အင်တင်နာတွေအတွက် Fan-Out နည်းပညာအသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိမ့်မယ်။ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကတော့ဒီပစ္စည်းကပါးလွှာတယ်။
iPhone7အတုအသစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမျက်နှာပြင်မှာဘောင်တွေမရှိဘဲ iPhone တစ်ခုပြသထားတယ်
iPhone အသစ်ကို Cupertino မှတရားဝင်မတင်ခင်မှာလများစွာရှိသေးသည်။
iPhone SE သည် Android သုံးစွဲသူများကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နေသည်
Samsung သည်ပထမ ဦး ဆုံး Galaxy Note ကိုစတင်မိတ်ဆက်သည့်အခါအန္တရာယ်များသောအဆင့်ကိုရောက်သောအခါ၎င်းသည်လုံးဝမှန်ကန်ခဲ့သည်။ လုပ်ဖို့မကြိုးစားခဲ့ဘူး
iPhone SE သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကြိုတင်မှာကြားထားချက် ၃.၅ သန်းရှိသည်
iPhone SE သည် Apple အတွက်အရေးပါသောအာရှကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သောတရုတ်တွင်ကြိုတင်မှာယူမှုများ ၃.၅ သန်းထက်မနည်းရှိခဲ့သည်။
အိုင်ဖုန်း SE ကိုစပိန်အက်ပဲလ်စတိုးတွင်သိုလှောင်ထားနိုင်သည်
အကယ်၍ သင်သည် iPhone SE ဝယ်ရန်အချိန်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါက၊ အွန်လိုင်းစတိုးရှိ Apple Store တွင်ကြိုတင်မှာကြားထားရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။
iPhone SE နှင့် iPad Pro နောက်ခံပုံအသစ်များမည်သို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်နည်း
iPhone SE နှင့် ၉.၇ လက်မ iPad Pro တို့တွင် Apple အသုံးပြုခဲ့သောနောက်ခံပုံအသစ်များကိုသင်ပြသပါမည်။
အကောင်းဆုံး iPhone SE အမှုများ
ဤအရာသည် iPhone SE အတွက်အကောင်းဆုံးကိစ္စများဖြစ်သည်။ ခြစ်ရာများနှင့်ပြတ်တောက်ခြင်းများကိုကာကွယ်နိုင်မည့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်သင်၏ Apple မိုဘိုင်းဖုန်းကိုဒီအဖုံးများဖြင့်ကာကွယ်ပါ။
iPhone7နှင့် iPhone7Pro တို့၏အယူအဆသစ်
iPhone SE ကဘာလို့အောင်မြင်တာလဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
iPhone SE ဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီ့အချိန်မှာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတာကိုတစ်ပြိုင်တည်းစာရင်းပြုစုချင်တယ်။
ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုဆန့်ကျင်သော iPhone SE: သေးငယ်သော်လည်းအနိုင်ကျင့်ခြင်း
အိုင်ဖုန်း SE သည် Apple မိတ်ဆက်ပေးသောနောက်ဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုပြိုင်ဆိုင်မှုကိုသင်ဆန့်ကျင်နေတာလဲ ဒီနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အရာအားလုံးကိုထွက်ရှာပါ။
Podcast7× 04: iPhone SE နှင့် iPad Pro တို့သည်အရွယ်အစားကြီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအက်ဖ်ဒဗလျူအိုင်အက်စ်ဒါမှမဟုတ်အိုင်ပီအက်ပ်စတဲ့ Cupertino ရှိ Apple ကျောင်းပရ ၀ ုဏ်၌ပြသခဲ့သည့်သတင်းများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်သည်
iPhone SE စတင်ပြီးနောက် iPhone 6s ကို ၀ ယ်သင့်သလား။
Apple ၏ ၄ လက်မအိုင်ဖုန်းအသစ်သည်၎င်းတို့၏ဟောင်းနွမ်းသော iPhone ဟောင်းကိုလဲလှယ်ရန်စီစဉ်သူများအကြားအကြပ်အတည်းများထပ်မံဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကအဖြေပါ။
အက်ပဲလ်ဟာ iPhone SE အတွက်ကိစ္စရပ်များကိုကမ်းလှမ်းထားပြီး iPhone5/ 5s နဲ့လိုက်ဖက်ကိုက်ညီမှုရှိ၊
Apple ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း iPhone SE အတွက်ဖြစ်ရပ်အသစ်များသည် iPhone5နှင့် 5s နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
iPhone SE ၏“ SE” သည်“ အထူးထုတ်ဝေမှု” (Special Edition) ကိုရည်ညွှန်းသည်။
iPhone SE ၏အထူးစီးပွားရေးဇုန် SE: Special Edition ၏စာလုံးများကဘာလဲဆိုတာကိုသိထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထူးထုတ် iPhone5ဖြစ်သည်။
ပထမအချက်အနေဖြင့် iPhone SE ၏ 2GB RAM ကိုအတည်ပြုသည်
၄ လက်မအရွယ် iPhone ကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံး SE စံသတ်မှတ်ချက်အရ iPhone SE တွင် 4GB RAM ရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
iPhone SE - Apple ရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဖုန်းလေးအကြောင်းသိဖို့လိုသမျှ
iPhone SE နှင့် ပါတ်သက်၍ ရှာဖွေပါ။ ၎င်း၏စရိုက်လက္ခဏာ၊ စပိန်စျေးနှုန်း၊ ရနိုင်မှုနှင့် iPhone 6s နှင့်ကွာခြားချက်များ။
iPhone SE အသစ်၏တင်ဆက်မှုအပြီးတွင်အက်ပဲလ်သည်၎င်း၏စတိုးဆိုင်တွင် iPhone 5s များကိုရောင်းချခြင်းကိုရပ်တန့်ခဲ့ပြီးနောက်သင့်အား iPhone 5s ၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြပါမည်။
တရား ၀ င်တယ်။ Apple က iPhone SE ကိုမိတ်ဆက်တယ်။ A9, 12MP ကင်မရာနှင့် Live Photos
အခုတရားဝင်ပါ Apple SE သည် iPhone SE နာမည်ဖြင့်လာသည့် ၄ လက်မအရွယ် iPhone အသစ်တစ်ခုကိုပြသခဲ့သည်။ သင်ဒါကိုဝယ်ချင်ပါသလား။
မတ်လ ၂၁ ရက်ဖြစ်ရပ်စတင်သည်။
ထုံးစံအတိုင်းမတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့်အစီအစဉ်သည်အတိုချုပ်ကြေငြာခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်၊
Keynote အတွက်သင်၏ပါးစပ်ကိုဖွင့်ခြင်း Apple ကဘာကိုတင်ပြမလဲ။
ယောက်ျားများကိုသတိရပါ။ အဓိကကျသောည ၇း၀၀ နာရီစပိန်အချိန်မဟုတ်၊ ဘာမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာမင်းတို့ကိုပြောတယ်။
အိုင်ဖုန်း SE နှင့် ၉.၇″ iPad Pro များရောက်လာပြီ - Apple Store ပိတ်သွားပြီ
အကယ်၍ သင်ဟာယနေ့ hardware အသစ်ရောက်လာမယ်လို့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုရင်၊ Apple က Apple ကိုပိတ်လိုက်ပါပြီ။
iPhone SE Apple ရဲ့ ၄ လက်မအရွယ်ကနေဘာများမျှော်လင့်ရမလဲ။
Apple က ၄ လက်မ iPhone အသစ်ကိုဒီနေ့ပြသမှာဖြစ်ပြီးတရားဝင်တရားဝင်မလုပ်ခင် iPhone SE terminal မှဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသင်ပြောပြပါမယ်။
iPhone7မှာဘက်ထရီက6နဲ့တူညီပြီးပါးလွှာတယ်
စွပ်စွဲချက်ပေါက်ကြားဆက်လက်။ iPhone7မှာပါးလွှာမှုရှိပေမယ့် iPhone6နဲ့တူတဲ့ဘက်ထရီတစ်လုံးရှိမယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တယ်။
နောက်ထပ် "iPhone 5se" case က 5s ဒီဇိုင်းနှင့်တူညီသည်
"iPhone 5se" အတွက်ပြသထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုက Gurman ပြောခဲ့သလိုပဲ iPhone 5s ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
Mark Gurman က "iPhone SE ဟာ iPhone 5s တွေနဲ့တူညီလိမ့်မယ်။ ချွန်ထက်တဲ့အနားက 12MP ကင်မရာပါ"
Mark Gurman က iPhone SE သည် 5s နှင့်တူညီသော်လည်း 12MP ကင်မရာနှင့် NFC ချစ်ပ်များကဲ့သို့အတွင်းပိုင်းတိုးတက်မှုများရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Unbox Therapy ကို iPhone7Case ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းကိုဗီဒီယိုဖြင့်ပြသသည်
iPhone7ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအချို့ကတော့ဆက်ပြီးပေါ်နေပါပြီ။ ဒီတစ်ခါမှာတော့နောက်လာမယ့် full-size iPhone ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတော့မရှိပါဘူး။
Apple TV4သည်တနင်္လာနေ့၏အဖြစ်အပျက်အတွက်ပြင်ဆင်နေသည်။ Apple Events application ကိုယခုရပြီ
နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲစတင်နေပြီ - Apple TV4အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုအခုရပြီ။
ပေါက်ကြားသော ၄ လက်မအရွယ် iPhone Case သည် iPhone SE အမည်ကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်
iPhone အသစ်ပေါက်ကြားမှုအသစ်ဖြစ်သော်လည်းယခုအချိန်တွင် ၄ လက်မအရွယ်ရှိသည်။ ၎င်းသည် "iPhone SE" အမည်ကိုအတည်ပြုနိုင်သောအကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
SanDisk သည် iPhone 256 Plus ၏7flash memory ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်
SanDisk သည်လာမည့် iPhone7Plus ၏ flash memory ကိုထောက်ပံ့သူဖြစ်နိုင်ပြီး၊ 256 GB model ကိုပေးလိမ့်မည်
ယိုစိမ့်မှုအသစ်အရ iPhone7၏အင်တင်နာအစုအဝေးများမည်သို့မည်ပုံရှိမည်ကိုပြသည်
iPhone7ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအသစ်ရဲ့ယိုစိမ့်မှုကအင်တင်နာတီးဝိုင်းတွေဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာပြသထားတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ယခုတိုင်အောင်ထင်မှတ်သကဲ့သို့၊
ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးပါ။ တရုတ်မီဒီယာမှာ iPhone ခလုတ်မရှိဘဲအစစ်အမှန် iPhone7ကိုပြသည်
iPhone7ရဲ့ပထမဆုံးပုံရိပ်ကထွက်ပေါ်လာနိုင်ပြီး iPhone လိုမျိုး6လိုပဲ home ခလုတ်မရှိပဲပြသနိုင်ခဲ့တယ်။ ဟုတ်ကဲ့!
၎င်းသည်စောလွန်းသေးသည်၊ သို့သော်ယင်းသည် iPhone7အမှု၏ပထမဆုံးပုံများလော။
ဒီနှစ်မှာ iPhone အသစ်အကြောင်းကောလဟလတွေထဲမှာမီဒီယာအများဆုံးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ် ...
4K ကင်မရာပါသော iPhone SE ကိုပြသည့်ကြော်ငြာကို Apple ကလုပ်ဆောင်နေသည်။ [RUMOR]
iPhone SE နှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလဟာလအများစုက ၄ လက်မအိုင်ဖုန်းအသစ်၏ကင်မရာသည်နိမ့်ကျလိမ့်မည်ဟုအာမခံသည်။
iPhone7ကအင်တင်နာနဲ့ချည်နှောင်ခြင်းတွေကိုစွန့်လွှတ်လိမ့်မယ်
ကောလဟလကို ad nauseam ထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုသော်လည်း၊ mainstream media သည် iPhone7သည်နောက်ဆုံး၌ antenna band များကိုစွန့်လွှတ်မည်ဟုအတည်ပြုသည်။
iPhone အတုအတုကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်ပြီ [Video]
iPhone SE ကိုဝယ်ချင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ သင်တရုတ်နိုင်ငံမှာရောက်နေရင်မိတ္တူတစ်လုံးဝယ်လို့ရပါပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မူရင်းနဲ့မတူဘူး
ဒီဟာ iPhone7Pro ရဲ့ dual camera module လား။
iPhone7နဲ့အတူရောက်ရှိလာမယ့်အသစ်အဆန်းတွေထဲမှာမျှော်လင့်ရဆုံးကတော့မှန်ဘီလူးနှစ်ခုရှိတဲ့ကင်မရာပါ။ နှင့်အတူ ...
iPhone7ကင်မရာကလုံးလုံးလျားလျားမဟုတ်တော့ဘူး
ပထမဆုံး iPhone rendering ကိုပေါက်ကြားသူမည်သူမဆို၏အဆိုအရလာမည့်ပန်းသီးစမတ်ဖုန်းသည်လုံးလုံးလျားလျားပြားချပ်ချပ်မရှိတော့ဟုဆိုသည်။
iPhone7၏ပထမဆုံး rendering သည်ပိုမိုကြီးမားသောကင်မရာကိုပြသသည်။ ဒီဇိုင်းအင်တင်နာ
iPhone7နှင့် ပါတ်သက်၍ အမှန်တကယ်သတင်းအချက်အလက်များစတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်းယခုတကြိမ်တွင် iPhone7သည်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်လိမ့်မည်ကိုပြန်လည်တင်ပြသည်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းအက်ပဲလ်သည်ပွဲကို ၂၁ ကြိမ်မြောက်တိုက်ရိုက်လွှင့်မည်ဖြစ်သည်
အံ့အားသင့်စရာတော့မဟုတ်ပါ။ အက်ပဲလ်ဟာမတ်လ ၂၁ ရက်မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မယ့်အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှာပါ။ အဲဒါကို Mac, iOS နဲ့ Windows ကနေမြင်နိုင်ပါတယ်။
iPhone 8 ကွေးနေတဲ့မျက်နှာပြင်ကထူးခြားစေမှာလား။
လာမည့် iPhone, iPhone 8 သည် OLED ဖန်သားပြင်များထည့်သွင်းနိုင်သည့်ကွေးသောမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်ဈေးကွက်တွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
iPhone SE နှင့် iPad Pro 9.7 ကိုတင်ပြမည့်ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖိတ်ကြားချက်ကို Apple မှပေးပို့သည်။
ရပါတယ်ဒါတရားဝင်ပါ Apple က iPhone SE နှင့် ၉.၇ လက်မ iPad Pro တို့ပါဝင်သည့် Keynote ဖိတ်ကြားချက်များကိုလွှတ်လိုက်သည်။
ပထမဆုံး iPhone7Case ကိုပေါက်ကြားခဲ့ပြီး 3.5mm Port ဖယ်ရှားခြင်းအတည်ပြုခဲ့သည်
ပေါက်ကြားမှုစတင်! တွစ်တာတွင် OnLeaks သည် ၄ ​​လက်မအရွယ် iPhone7case ၏ပုံရိပ်များကိုပေါက်ကြားစေခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ဖြစ်လိမ့်မည်လော။
iPhone5နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟာလ ၅ ခုရှိခဲ့သည်
iPhone7ဟာကောလာဟလတွေတိုးများလာနေပြီ။ ဒီနေ့အက်ပဲအသစ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်တဲ့အရာ (၅) ခုကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမယ်။
Galaxy S7 သည် iPhone 6s ကိုအခြေခံစံများထက်များစွာကျဉ်းမြောင်းသည်
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူအချို့သည်ထိုနည်းအတိုင်းမမြင်တွေ့ရသော်လည်းမကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုမို၍ ပြောဆိုခဲ့သည် ...
Galaxy S7 ၏ကင်မရာသည် iPhone 6s Plus ထက်များစွာသာလွန်သည်
iPhone 6s Plus ကင်မရာနှင့် Galaxy S7 နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း မည်သည့်မိုဘိုင်းလ်ကအကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံများရိုက်သနည်း။ ရှာတွေ့သည်! (အရိပ်အမြွက်: Samsung အနိုင်ရရှိ)
iPhone SE များမရောက်ရှိခင် iPhone 5s ၏ကုန်ပစ္စည်းသည်ကုန်သွားသည်
iPhone SE နီးကပ်လာပြီဆိုတာသိသာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအရ iPhone 5s ရဲ့ရောင်းအားသည်စတိုးဆိုင်တော်တော်များများမှာနိမ့်ကျနေသည်။
iPhone 6s Plus နှင့် Samsung Galaxy S7: ရေခံနိုင်မှု [Video]
စွမ်းဆောင်ရည်အရနောက်ဆုံးပေါ် iPhone မော်ဒယ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ထုတ်ကုန်အသစ်များဖြန့်ချိပြီးနောက်
OLED မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံးအိုင်ဖုန်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိမည်
Apple က iPhone မှာလည်း OLED ဖန်သားပြင်ကိုသုံးလိမ့်မယ်လို့ကောလာဟလတွေအမြောက်အများရှိနေပါတယ်။ ဒါကငါတို့ထင်တာထက်ပိုမြန်တယ်။
ဤဖြစ်နိုင်သော iPhone SE သည်လူတိုင်းကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေလိမ့်မည်
နောက်ဆုံးထုတ်အိုင်ဖုန်း SE ၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံစံဖြစ်သည်။
iPhone 6s Plus vs. Galaxy S7 Edge: စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်း [Video]
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်မုန်းတီးမှုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ထိုအရာသည်သူတို့ကိုသင်ဖွင့်ရန်မလိုတော့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Galaxy S7 သည် iPhone 6s နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရပြီး၊
TSMC သည် iPhone SE မတိုင်မီမတ်လတွင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုနှစ်ဆတိုးမည်လား။
TSMC ဟုလူသိများသောထိုင်ဝမ် Semiconductor Manufacturing Company သည် iPhone ပရိုဆက်ဆာထုတ်လုပ်မှုကိုနှစ်ဆတိုးစေသည်။
iPhone SE ၏ကျေးဇူးကြောင့် Apple သည်ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် 45M အိုင်ဖုန်းများကိုရောင်းချမည်
assemblea line အနေဖြင့် Apple သည်ဇွန်လအထိ iPhone ၄၅ သန်းရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး ၄ လက်မအရွယ် iPhone SE ကိုစတင်ရောင်းချပေးခဲ့သည်။
iOS9၏ iOS 8 နှင့် iOS7vs iOS6vs iOS5သည်မြန်ဆန်စွာစမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်
dual-lens ကင်မရာပါတဲ့ iPhone7ကို iPhone7Pro လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်
Apple က iPhone7အတွက်အထူးကင်မရာနှစ်လုံးတပ်ဆင်နိုင် အာရှမီဒီယာတစ်ခုရဲ့အဆိုအရဒီပစ္စည်းကို iPhone7Pro လို့ခေါ်တယ်။
၎င်းသည်စောလွန်းသေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည် iPhone7ကိုယ်ထည်လား?
ကျနော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလမှာရှိသေးတယ်၊ iPhone7အကြောင်းပြောဆိုဖို့စောလွန်းသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြင်သစ်မီဒီယာကစက်တင်ဘာလမှာတင်ဆက်မယ့်အိုင်ဖုန်းရဲ့ကိုယ်ထည်ကိုပေါက်ကြားစေလိမ့်မယ်။
iPhone SE နှင့် 9.7″ iPad Pro တို့ကိုမတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်
ပြက္ခဒိန်ကိုပြန်လည်အမှတ်အသားပြုပါ။ iPhone SE နှင့် ၉.၇ လက်မ iPad Pro တို့ကိုတင်ဆက်မည့်ပွဲကိုမတ်လ ၂၁ ရက်တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအပတ်တွင် iPhone 5S နှင့်ယခင်က iPhone XNUMXse ဟုသိကြသော iPhone SE အကြောင်းပိုမိုသိရှိရသည်။
iPhone SE ၏ရှေ့မျက်နှာပြင်မှဓာတ်ပုံများက၎င်းသည် 3D Touch ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုသည်
iPhone SE ၏ပုံရိပ်အသစ်များရောက်လာသည်။ ဒီမှာသင်၏ရှေ့မျက်နှာပြင်၏ပုံရိပ်များပါဝင်ပြီးသင် 3D Touch panel ကိုသင်အနိုင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုလိမ့်မည်။ သတင်းဆိုး။
Ming Chi Kuo - ၂၀၁၆ တွင် iPhone SE ယူနစ် ၁၂ မီလီမီတာ။ မကြာမီစတင်မည်
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင်စတင်မည်ဟုခန့်မှန်းရသည့် iPhone SE ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုသည်စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
iPhone SE: 12MP ကင်မရာနှင့်ယူရို ၄၀၀ မှ ၅၀၀ ကြားရှိကြောင်း KGI မှပြောကြားခဲ့သည်
ယခုအချိန်တွင်အရာရာတိုင်းကမတ်လတွင် ၄ လက်မအရွယ် iPhone အသစ်ကိုပြသမည်ဟုဆိုနေပါသည်။ ရက်စွဲ ...
iPhone 5se က iPhone ရောင်းအားကိုတိုးတက်စေမှာမဟုတ်ဘူး
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က iPhone 9se အသစ်ကို 5to5Mac မှတဆင့်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။
iPhone SE, Apple က ၄ လက်မအရွယ် iPhone ကိုတင်ဆက်နိုင်သည့်နာမည်
iPad Air3မျှော်လင့်ထားသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည် iPad Pro ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလေ့လာသိရှိခဲ့ရသည်။ ၄ လက်မအရွယ် iPhone နှင့်လည်းအလားတူဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်းကို iPhone SE ဟုခေါ်သည်။
iPhone 5se ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များသည် 3D ဒီဇိုင်းပုံစံဖြင့်ပေါ်လာသည်
သင် iPhone 5se ကိုမျှော်လင့်နေပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ပထမပုံရိပ်တွေကပေါ်ထွက်လာပြီးသားဖြစ်လို့အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် 3D ဒီဇိုင်းတွေအကြောင်းပါ။
iPhone Widescreen - ကျယ်ပြန့်သောမျက်နှာပြင်ပါသော iPhone တစ်ခု၏အယူအဆ
iPhone သဘောတရားတွေအများကြီးရှိတယ်၊ တိုးချဲ့ထားသောမျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့်ထူးခြားသည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သော iPhone Widescreen ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည်။
assemblea line သည် iPhone7အတွက် dual camera နှင့် stereo speakers များအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီးဖြစ်သည်
ကျနော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလမှာရှိနေတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Apple ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများကစွန့်စားမှုများမပြုလုပ်လိုကြဘဲ iPhone7processor ကိုထုတ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေကြသည်။
Dual Camera နှင့် iPhone 7e အတွက်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းပါသော iPhone5အသစ် (Concepts)
iPhone7နှင့် iPhone 5e သဘောတရားများပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဒီကိစ္စမှာသူတို့ကအကောင်းဆုံးပုံရိပ်တွေအတွက်နှစ်ဆကင်မရာတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုအိပ်မက်မက်စေတယ်။
Live Photos နှင့် 6D Touch တို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့် iPhone 3s ကြော်ငြာများ
အက်ပဲလ်ဟာကြော်ငြာအတွက်ပိုက်ဆံအများဆုံးသုံးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုပါ။ Samsung၊ Sony, HTC စသည့်စမတ်ဖုန်းများ၏အဓိကထုတ်လုပ်သူများ ...
iPhone 5se ၏ပရိုဆက်ဆာသည် A9 ဖြစ်လိမ့်မည်။ iPad Air 3, A9X
လာမယ့် Apple ထုတ်ကုန်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အသစ်က iPhone5ကို A9 ပရိုဆက်ဆာနှင့် iPad Air3နှင့် iPad Pro A9X တို့ဖြင့်ရောက်ရှိမည်ကိုသေချာစေသည်။
iPhone5သည်ယခုနှစ်တွင်စီးရေ ၁၀ သန်းရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်
မတ်လ ၁၅ ရက်သတ်မှတ်ထားသည့်ရက်စွဲအလိုတွင် Cupertino ယောက်ျားများမှတရားဝင်အတည်ပြုခြင်းမရှိသောကြောင့် ...
Apple ကအိန္ဒိယတွင် iPhone 5c နှင့် 4s များကိုရောင်းချခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်
လက်ရှိတွင် Apple ၏အားထုတ်မှုအားလုံးသည်တစ်ဘီလီယံကျော်သောလူ ဦး ရေဖြင့်အိန္ဒိယကိုသာအာရုံစိုက်နေသည်။
Apple က iPhone 5se တပ်ဆင်ရေးလိုင်းကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်
တရားဝင်တင်ဆက်မှုအတွက် Apple ထံမှတရားဝင်အတည်ပြုချက်မရှိခြင်းသည်တစ်လမပြည့်မီ ...